जनयुद्धमा सक्रिय १३ वर्षे कमरेड रोहित - Myagdi Online
जनयुद्धमा सक्रिय १३ वर्षे कमरेड रोहित
बाहिरबाट आवाज आयो ‘यो त माओवादीको घर हो, ढुङ्गा बजा केटा हो।’ म एक छिन छक्क परें, हामी कहिलेबाट माओवादी भयौं? हाम्रो घरमा माओवादी को छ?
***शाही सेनाहरू जनसेनाको भेषमा गाउँ-गाउँ पस्न थालेका थिए। यसो खुट्टामा हेरेको गोल्डस्टार जुत्ता देखेपछि हाम्रै साथीहरू हुन् भन्ने लाग्यो र ढुक्क भएँ। त्यसपछि परिचय गरियो। मैले भने, ‘म कमरेड रोहित! यस इलाकाको विद्यार्थी इन्चार्ज।’
आमाले ‘चुप लाग्’ भन्नुभयो। बाहिरबाट आवाज आयो, ‘यो त माओवादीको घर हो, ढुङ्गा बजा केटा हो।’
म एकछिन छक्क परें माओवादीको घर? हामी कहिलेबाट माओवादी भयौं? हाम्रो घरमा माओवादी को छ?
अधिकांश दिन हाम्रो घरमा यसरी नै ढुङ्गा बर्सिन्थे अनि भन्थे, ‘यो आतङ्ककारी माओवादीको घर हो।’
यो वि.सं. ०५५/०५६ तिरको कुरा। त्यतिबेला म ७–८ वर्षको थिएँ होला। मेरो कलिलो मस्तिष्कमा माओवादीको छाप बस्यो। पछि थाहा पाउँदै गएँ, हाम्रो घरमा माओवादीका साथीहरू आएर खाना खान्थे। तत्कालीन पार्टी इञ्चार्ज गोविन्द पौडेल (क. प्रवीण) हाम्रो नातेदार समेत भएकाले माओवादीका मान्छे आउँथे। नत्र त्यो भन्दा हाम्रो अरु कुनै सम्बन्ध थिएन, उनीहरू हाम्रो घरमा आउनलाई।
Kimar thapa says:
त्याेबेला अखिल( क्रान्तिकारि )संगठित गर्न काे अायकाे थियाे थाहा झ?